ကျန်းမာစေဖို့နည်းလမ်းကောင်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
2. ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ စားသုံးပေးရပါမယ်။ အစားအစာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ ရွေးချယ်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ပိုစားကောင်းသလို ဈေးနှုန်းလည်း ပိုသက်သာပါတယ်။ ဘယ်လောက်စားတယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လိုစားတယ်ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးတာကြောင့် စားတဲ့အစားအသောက်ကို သတိထား ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
3. ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ ဆေးလိပ်ဟာ အဆုတ်ကင်ဆာအပြင် အခြားကင်ဆာရောဂါများကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်လေဖြန်းရောဂါတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
4. ဘဝကို ညီညွတ်မျှတစွာ နေပါ။ အလုပ်ချိန်၊ ပျော်ချိန်ပါးချိန်နဲ့ နားနေချိန်တွေကို မျှမျှတတထားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါကျန်းမာပါမှ ဘဝမှာ နေပျော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5. ရေ အများကြီးသောက်ပါ။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမှသာ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ခြင်းတွေမှ ကင်းဝေးစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေသောက်ဖို့ မမေ့ရလေအောင် အချိန်မှတ်ထားပြီး သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။